माग्नेको जन्मदिनमा दीपकले भने - पहिले हात मात्र मिलाइन्थ्यो अहिले मन मिल्छ
Sun, Apr 22, 2018 | 18:10:22 NST
17:08 PM ( 1 year ago )
Total Views: 22.4 K
काठमाडौं, चैत २८ – हाँस्य कलाकार केदार घिमिरेको ४३ औँ जन्मदिन काठमाडौंमा रेडियो अडियोको प्रागंणमा मनाइएको छ ।
उनको जन्मदिन विशेष कार्यक्रममा निर्देशक दीपा श्री निरौला, दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, शिवहरी पौड्याल, किरण केसी, निर्देशक विकास राज आचार्य, केदारकी श्रीमती सीता घिमिरेलगायतको उपस्थिति रह्यो । उपस्थित सबैले केदारलाई सु-स्वास्थ्य र दिर्घायुको कामना गर्दै जन्मदिनको शुभकामना दिए ।
केदार घिमिरेको जन्मदिन विशेष कार्यक्रममा आइपुग्दा कलाकार दीपकराज गिरी सबैको नजरमा परे । उनको हातमा टाँका लगाएर पट्टी बाँधीएको थियो जसले सबैको ध्यान तान्यो । हामीले उनीसँग यसको बारेमा जानकारी लिन खोज्दा उनले आफ्नो हातमा पट्टी किन ? र कसरी ? बाँधियो भन्ने कुरा भन्न चाहेनन् ।
उनले कलाकारहरु बिरामी भएको खबर मिडियाले सकेसम्म प्रकाशित नगरेकै राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए । कोही पनि बिरामी भएको वा घाइते भएको तस्बिर र समाचार सामाजिक सञ्जालमा आउँदा आफन्त र शुभचिन्तकलाई तनाव हुने भन्दै उनले केदार घिमिरेलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन थाले ।
शुभकामना दिनुभन्दा पहिले उनले केदार घिमिरे आफ्नो एटिएम कार्ड भएको भन्दै त्यहाँ उपस्थित सबैलाई मजैलै हँसाए । केदार बिरामी भएको प्रसंग जोड्दै उनले भने, ‘सायद गएको वर्ष धेरै नै घोटी छु की क्या हो घोट्दा घोट्दै स्क्रयाच भएछ ।’
पछि भने दीपकले भावुक हुँदै भने, ‘हामी बीच भावनात्मक सम्बन्ध छ । पछिल्लो समयमा हामी हाँस्य कलाकारहरु बीच एक खालको एकता भएको छ । पहिले–पहिले हामी बीच एक किसिमको प्रतिस्पर्धाको गन्ध आउँथ्यो । कार्यक्रमहरुमा हात मात्रै जोडिन्थ्यो । मन जोडिदैन थियो । तर अहिले भने हात पनि जोडिन्छ । मन पनि जोडिन्छ । गाला पनि जोडिन्छ । यो एकताको नतिजा पनि एकदमै राम्रो आएको छ । दिग्गज सिनेमा निर्माताहरुको अगाडि पनि हामी सिकारुहरुले बनाएको सिनेमाले सबैभन्दा धेरै कमाउने रेकर्र्ड कायम गरेको छ । यो सबै हाम्रो एकताको फल हो । अझ यसमा केदार घिमिरेको अति नै महत्वपूर्ण भूमिका छ । उसले बिरामी भएको समयमा पनि सिनेमाको लागि भए त आउँछु ! भन्दै कथा लेखनमा सघायो । उसको त्यो काम एकदमै प्रशसंनीय छ । सहकार्यमा उसले सधैँ तोड्नेहरुलाई जवाफ दिँदै जोड्ने मै आएको छ ।’
त्यस्तै दीपकले केदारले सरकारले दिएको सहयोगलाई अस्वीकार गरेको कुराले पनि एक किसिमको राम्रो सन्देश गएको र यसले सबै कलाकारहरुलाई नै खुशी तुल्याएको बताए । किनकी केदारले कलाकारहरु पनि सक्षम छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दै सबै कलाकारहरुले गर्व गर्न पाउर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिए । यसका साथै दीपकले केदारको फ्यान फलोअर्स एकदमै धेरै भएकोमा पनि खुशी व्यक्त गरेका छन् ।